DHEGEYSO-Dhawaqa hubka oo Galkacyo laga maqlayo iyo waxgaradka Mudug oo nabad ku baaqaya. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dhawaqa hubka oo Galkacyo laga maqlayo iyo waxgaradka Mudug oo nabad ku baaqaya.
Oktoobar 23, 2016 11:21 g 0
Galkacyo, Oct 24 2016–Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa saaka dib uga bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Galmudug, oo indhowaalahaan waqooyiga magaalada isku horjoogey.
Dagaalka saaka oo ah mid laysu adeegsaanayo hubka culus ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu bilowday kadib markii ciidanka Puntland ee kusugan waqooyiga Galkacyo lagu soo qaaday weerar lama filaan ah.
Axmed Aadan Samatar, oo kamid ah waxgaradka gobolka Mudug ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Galkacyo inay joojiyaan dagaalka kana waa hadlaan wax walba oo ay isku hayaan xillligaana shacabkaa colaada ka dulqaadaan.
DHEGEYSO-Dhaawacyada ciidanka Galmudug oo lagaarsiiyey Muqdisho.
DHEGEYSO=Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Cumar Laki Man.